Malunga nathi | I-ZHEJIANG JIAWEI I-ARTS & I-CRAFTS Co, Ltd.
I-Zhejiang Jiawei Ubugcisa kunye neCraf Co, Ltd ngumenzi kunye nomthengisi wentengiso yezangaphandle, iintyatyambo, amagqabi kunye nemithi. Sifumaneka kwisixeko saseDongyang, kwiphondo laseZhejiang, China. Iimveliso zethu eziphambili ziquka iMithi yeArtificial Palm, imithi yeFicus, imithi yeB bamboo, imithi yeFiddle, imithi yekokonathi, imithi yeBanana, isityalo seDracaena, isityalo seOrchid kunye nesityalo seMonstera njl.
Yasekwa ngonyaka ka-2003, umzi-mveliso wethu uhlala kwindawo yeemitha ezili-26 000 zeekhilomitha kunye nama-400 eemitha eziimitha zomboniso. Ukuthatha i-16years, umzi-mveliso wethu ngoku unabasebenzi abangaphezu kwama-200 kunye namawaka eemodeli. Inethiwekhi yokuthengisa iye yanda ukuya kumazwe angama-40 ehlabathi, kwaye idlala kakuhle e-AUSTRALIA, e-UK, EJALIMANE, EFRANSI, EPOLAND, JANPAN, Mexico, BRAZIL nakwamanye amazwe nakwimimandla.
Impumelelo ye-Jiawei ivela kungekuphela nje kwiimveliso ezinomgangatho olungileyo, kunye nokukwazi ukulawula iindleko, kodwa ngokwenza uphando, ukuphucula nokwenza izinto ezintsha. Ukwakha iqela lobugcisa bokusebenza, ukuthenga izixhobo zokwenza imveliso eziphambili kunye nokumisela iinkqubo zolawulo olusemgangathweni kusiqinisekisa ukuba sigcina amandla okwenza ukhuphiswano kunye nokuzimisela okuqhubekayo ekuphuhliseni kwiminyaka elandelayo.
Ngo-2018, umzi-mveliso wethu udlulise uphicotho lweSedex. amandla ethu okuvelisa inyanga nenyanga afikelela kuma-30 ngama-40 eesebe ze-HQ.
"Umthengi kuqala, ngokusekwe kwinkonzo, ukuSebenzisa ubuNgcali, ukuPhakamisa umgangatho ophezulu" zizikhokelo zethu kunye nemithetho-siseko. I-OEM ikwafumaneka kuthi. Samkela ngokufudumeleyo abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba baseke intsebenziswano kwaye benze ikamva eliqaqambileyo nathi kunye.